विचित्र संसार  OnlineKhabar
कुनै सुन्दर युवतीलाई देख्दा पुरुषको पहिलो नजर युवतीको कुन अंगमा पर्ला ? पहिलोपटक कुनै महिलालाई भेट्दा पुरुषले झ्वाट्ट कुन अंगमा नजर डुलाउला ? धेरैको उत्तर हुनसक्छ वक्षस्थल । तर एक अध्ययनले भने यो कुरा झुटो सावित गरिदिएको छ । एक अन्तराष्ट्रिय सर्भेक्षणबाट प्राप्त नतिजालाई विश्वास गर्ने हो भने पुरुषको पहिलो नजर महिलाको आँखामा पर्दछ...
उद्देश्य के लिनु ? उडि छुनु चन्द्र एक भन्ने गरिन्छ हामीकहाँ । तर पोल्याण्डकी एक युवतीले भने उडेर चन्द्रमा छुने भन्दा पनि अझै कडा जस्तो लाग्ने उद्धेश्य लिएकी छिन् । २१ वर्षकी ती युवतीले आफ्नो जिवनकालमा १ लाख जना पुरुषसँग ओछ्यान तताउने लक्ष्य लिएकी छिन् । उनले आफ्नो यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि काम...
« अघिल्ला 1 … 184 185 186 187 पछिल्ला »
बागदरबार भत्काउने काठमाडौं महानगरको तयारी
देउवालाई मोदीको ‘सरप्राइज’, गार्ड अफ अनर अघि नै ‘वार्मअप’ भेट
एमालेले २ नम्बर प्रदेशमा सबै शक्ति परिचालन गर्ने
डुअल कलर टोनसहित सुजुकीको ‘इग्निस’ अब नेपालमा